Izindaba - Mochi
Yebo, ukubukeka okuphezulu. Ukufakwa komkhiqizo eminyakeni engama-20 edlule akunakuqhathaniswa nokwamanje. Abathengi banamuhla baya ngokuya befuna kakhulu ikhwalithi yemikhiqizo, ukwakheka kwamaphakethe nokunambitheka kwemikhiqizo. Okokuqala, kuyadingeka ukuba nephunga le-mochi ngemuva kokuvula, umnyango uthambile, ukwakheka kwebhizinisi kunengqondo, futhi inkomba yokukhiqiza ilawulwa ngokuqinile. Kuphela ngokulandela ukukhiqizwa okuncane, ubuciko, nokufeza umkhiqizo omkhulu, lapho kungaba khona isikhala semakethe ebanzi.
• Isilinganiso, intengo ephezulu yomkhiqizo. Akugcini nje ukuthi ikhwalithi ingehliswa, kepha izidingo ziya ngokuya zikhula, kepha akusho ukuthi ikhwalithi ephezulu nentengo ephezulu ziyefana noma zehla kunemikhiqizo encintisanayo.
• Isivivinyo, isivivinyo nesivivinyo esinephutha nezindleko eziphansi kanye nesivivinyo nephutha elisheshayo. Akuyona yonke imikhiqizo emisha ezophumelela, futhi ukunambitheka, ukwakheka kokupakisha, nomqondo wokumaketha akuhlangabezani nezidingo zabathengi. Kuyadingeka ukugxila ekuhlaziyweni kwedatha nasekuqondeni kwesidingo sabathengi ngokujula nemininingwane. Okufunwa ngabathengi, basebenza kanzima kulokhu. Kungokuhlangabezana nesidingo kuphela lapho inani lomkhiqizo lingabonakala futhi abathengi banganeliseka.
• ④. Umkhiqizo uphakamisa ukukhushulwa. Iqhutshwa ngumkhiqizo, futhi iqhutshwa yisiko ekuphathweni, silwela ukwakha umphakathi onekusasa elihlanganyelwe nabaphakeli bethu.
• ⑤. Umqondo wokuphathwa komkhiqizo ugxile kakhulu ezintweni ezintathu ezinkulu zokwehlukahlukana, ukudla okuhle nenani elifanele, nenani lemali. Okuhlangenwe nakho komkhiqizo, ukuphishekela izithako zemvelo, ngokungeza okuncane noma okungekho, ukuhlangabezana nezidingo zezempilo zamaqembu ahlukene abantu.